ထင္မွတ္မထားတဲ့ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေၾကာင့္ ရူးမတတ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ နီလန္း – XB Media Myanmar
နီလန္းကေတာ့ မေန႔က က်ေရာက္လာတဲ့ သူမရဲ႕ေမြးေန႔ေလးမွာ သူမရဲ႕ဖန္ေတြက Surprise အၾကီးၾကီးတိုက္လိုက္တာေၾကာင့္ ရူးမတတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ပရိသတ္ၾကီးေရ ဘာ Surprise ဆိုတာ ပရိသတ္ၾကီးသိၾကလား။ နီလန္းကို သူမရဲ႕ ဖန္ေတြက ျပိဳင္ကားတစ္စီးဝယ္ေပးလိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအိုင္ေဒါ Season3မွာ ယခုလိုမ်ိဳးဖန္ေတြစုေပါင္းျပီး ကားဝယ္ေပးဖူးတာ နီလန္းနဲ႔ဆို (၃) ေယာက္ေျမာက္ရွိခဲ့ပါျပီ။
နီလန္းကေတာ့ တကယ္ကိုအရူးတစ္ေယာက္လိုပဲ အိပ္မက္လား၊ တကယ္လား ေဝခြဲရခက္ေနဆဲပါပဲတ့ဲ။
“အိပ္မက္လား? တကယ္လား? 😭😭Nilen ေမြးေန႔လက္ေဆာင္အတြက္ အမာခံပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ 🎂 Birthday Surprise 🎂 😲😲 ႐ူးခ်င္တယ္တကယ္ 😫😫 ေပ်ာ္လြန္းလို႔ပါ 😭😭 ဘာေျပာရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး 😑😑😍အားလံုးကို မေျပာျပတတ္ေအာင္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္😍Nilen ၿပိဳင္ကားေလးတစ္စီးပိုင္ဆိ္ုင္ဖူးၿပီ 🚗 အေပ်ာ္ဆံုးေန႔ပါ😭 God Bless You All ❤️ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးတဲ့သူေတြအကုန္လံုးကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ရွင့္အားလံုးကိုခ်စ္တယ္❤️” လို႔ သူမရဲ႕အေကာင့္မွာေ၇းသားေဖာ္ျပထားတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။
နီလန္းရဲ႕ ဒီႏွစ္ေမြးေန႔ေလးကေတာ့ ဖန္ေတြရဲ႕ အားေပးမွု၊ လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔တင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အတိျဖစ္သြားခဲ့တာေသခ်ာပါတယ္ေနာ္။Happy Birthday ပါေနာ္နီလန္း။
မြန်မာအိုင်ဒေါပြိုင်ပွဲနဲ့ လူသိများလာခဲ့တဲ့ နီလန်းဟာ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3မှာ Top 11 ထိဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခက်ခဲတဲ့ ရင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့နီလန်းဟာ ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီး တက်လှမ်းယှဉ်ပြိုင်နေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ ဂီတလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ပွဲတွေများစွာကိုလည်း ဖျော်ဖြေနေတာတွေ့ရပါတယ်။
နီလန်းကတော့ မနေ့က ကျရောက်လာတဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ဖန်တွေက Surprise အကြီးကြီးတိုက်လိုက်တာကြောင့် ရူးမတတ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ဘာ Surprise ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးသိကြလား။ နီလန်းကို သူမရဲ့ ဖန်တွေက ပြိုင်ကားတစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3မှာ ယခုလိုမျိုးဖန်တွေစုပေါင်းပြီး ကားဝယ်ပေးဖူးတာ နီလန်းနဲ့ဆို (၃) ယောက်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
နီလန်းကတော့ တကယ်ကိုအရူးတစ်ယောက်လိုပဲ အိပ်မက်လား၊ တကယ်လား ဝေခွဲရခက်နေဆဲပါပဲတဲ့။
“အိပ်မက်လား? တကယ်လား? 😭😭Nilen မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက် အမာခံပရိတ်သတ်တွေရဲ့ 🎂 Birthday Surprise 🎂 😲😲 ရူးချင်တယ်တကယ် 😫😫 ပျော်လွန်းလို့ပါ 😭😭 ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး 😑😑😍အားလုံးကို မပြောပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်😍Nilen ပြိုင်ကားလေးတစ်စီးပိုင်ဆိုင်ဖူးပြီ 🚗 အပျော်ဆုံးနေ့ပါ😭 God Bless You All ❤️ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကိုချစ်တယ်❤️” လို့ သူမရဲ့အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နီလန်းရဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့လေးကတော့ ဖန်တွေရဲ့ အားပေးမှု၊ လက်ဆောင်တွေနဲ့တင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိဖြစ်သွားခဲ့တာသေချာပါတယ်နော်။Happy Birthday ပါနော်နီလန်း။
ကမၻာ့ ​ေထာင္​​ေတြထဲမွာ ​ေသခ်ာ​ေပါက္​ ဝယ္​ယူလို႔ရႏုိင္​တဲ့ ပစၥည္​း ၇ မ်ိဳး